WARBIXIN:Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda JigJiga, Ciidamo lasoo dhoobay Jidadka & Diyaarado guuxooda la maqlayo – Puntlandtimes
WARBIXIN:Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda JigJiga, Ciidamo lasoo dhoobay Jidadka & Diyaarado guuxooda la maqlayo
August 4, 2018 W LAASCAANO
JIGJIGA(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee Ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa sheegaya in ay xaalad daganaansho ka jirto gudaha magaalada, ilsa markaasna ciidamada Amnigu ee Soomaalida ah ay kusugan yihiin jidadka muhiimka ah ee magaaladaas.
Dhamaan ganacsigii ayaa xirmay, waxaana maanta la boobay inta badan Hantida Ganacsato badan oo kasoo jeeda Qawmiyadaha kale ee dalka Itoobiya, gaar ahaana Oromada, Tigreega & Amxaaradda, taas oo ilaa hadda la cambaareynayo.
In ka badan 17 qof ayaa la dilay oo u dhashay qawmiyadahaas, sidaas oo kale baabuur ayaa la gubay, guryo ay daganayeen dad rayid ah ayaa la gubay, Kaniisado ayay u gubeen dadka magaaladu, waxayna ka xumaadeen ficilka ciidamada Milateri kusoo galeen magaalada.
Wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ee ay kasoo horjeedaan ciidamada Milaterigu uu hadda kusugan yahay Saldhig ciidan oo ay leeyihiin ciidamadiisa gaarka ah, kuwaas oo ka soo horjeeda nidaamkii ay ka tirsanaayeen.
Sidaas oo kale diyaarad joog hoose ku duulaya ayaa dulmaraya magaalada Jigjiga, dadkuna waxay caawa ku seexanayaan cabsi iyo xaalad hubanti la’aan ah oo dhanka maamulka ama Amniga ah, iyadoo gobalada oo dhan ay sidaas yihiin.
Kasokow diyaaradahaas wararku waxay sheegayaan in duulimaadyada Milaterigu ay sii kordhayeen saacadihii u dambeeyey, waxaana la maqlayaa juuxa diyaaradaha dagaalka.
Wariye kusugan magaalada oo ay la xariirtay Puntlandtimes.com wuxuu sheegay in ay fiidnimadii soo dhacday korontada oo maanta oo dhan maqneyd, isagoo sheegay in sidaas oo kale ciidamada Booliska ee magaaladu ay shaqadooda caadi u wateen galabta, laakiin gaadiidkii dadweynaha oo dhan ayaa joogsaday wadooyinkana wey haawanayaan dadkii iyo gaadiidkii oo istaagay awgeed.